C/Laahi Yuusuf Imaanshihiisii Muqdisho Maxaa Iska Beddelay…
Maxay yihiin hadallada kulkulul ee uu la beegsaday Hoggaamiye kooxeedyada…
Danaha Itoobiya iyo Carabta siduu u kala saaray….
WAREYSI XASAASI AH OO UU SIIYAY ASHARQAL AWSAT
E-Mail - amiinkhasaaro@hotmail.com
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federalka ah ee Soomaaliya Col. C/llaahi Yuusuf Axmed oo u warramay jariidadda Sharqal Awsat ee ka soo baxda dalka Ingiriiska ayaa wuxuu si aad ah u diiday in dowladiisa loogu yeero inay tahay mid dibad joog ah, wuxuuna xusay in illaa muddo laba bilood gudahood ah uu ku laaban doono dalka, laba isbuuc gudahoodna lagu dhameystiri doono dhismaha dowladiisa. Madaxweynaha oo wareysigaan bixiyay markii uu ka soo ambabaxayay Magaalada Qaahira kaddib markii uu ka qaybgalay janaasadii Yaasir Carrafaad ayaa wuxuu sheegay inuu aad u jecel yahay in dowladaha Carabta ay ka mid noqdaan ciidammada Nabad ilaalinta Soomaaliya oo uu madaxweynuhu ka codsaday midowga Afrika. Wuxuu kaloo sheegay inuu diyaar u yahay inuu wada hadal nabadeed la yeesho madaxda gobolka isku magacaabay Somaliland oo dhawaan ciidammo ka tirsan Somaliland ay foodda is dareen kuwo ka socda maamul gobolleedka Puntland oo uu kal hore C/llaahi laftiisu madaxweyne u ahaa.
C/llaahi Yuusuf wuxuu ballanqaaday inuu wax ka qaban doono awoodda hoggaamiye kooxeedyada iyo malleeshiyooyinka inta badan waddanka dhibaatada ku hayay, isagoo carrabka ku adkeeyay inay ka go’an tahay inuusan marnaba u ogolaan in mid ka mid ah uu jebiyo sharciga dalka amase uu carqaladeeyo dadaalka dowladdiisa ugu jirto horumarinta dalka.
Isagoo ka faaloonaya qaabka uu u doonayo inuu dalka ugu laabto wuxuu yiri: “Waxaan dadaalkayga isugu geynayaa waxyaabaha lagama maarmaanka u ah in aan dalka ku laabanno, waxaan rajeynayaa inaan dalka ku laabanno ugu dambeyn dabayaaqada sannadkaan, ama ugu badnaan horraanta sannadka soo socda, waxaan noo degsan qorshe la xiriira sidii aan u soo celin lahayn amniga iyo kala dambeynta iyo weliba sidii hubka looga dhigi lahaa malleeshiyooyinka gacanna loo siin lahaa ciidammada Nabad ilaalinta ee aan ka dalbannay midowga Afrika”. “Imaanshaha ciidammadaasi waxay lagama maarmaan u tahay fulinta qorshooyinkeenna la xiriira dhanka nabadda, waayo Soomaaliya waxay u baahan tahay xilligaan howl aad u ballaaran”. Ayuu yiri Col. C/llaahi Yuusuf.
Mar uu ka jawaabayay su’aal ahayd ma Muqdisho ayaad toos uga dagaysaa mise Baydhabo iyo Kismaayo ayaad tagaysaa? Wuxuu ku jawaabay: “Muhiim ma aha magaalada aan tagayo ee aan ka billaabayno howlaheenna, balse muhiimaddu waxay tahay inaan ka dhabeyno wixii aan goosannay inaan qabano, magaalo kastoo aan tango waa uun Soomaaliya”. Su’aal ahayd “Kulankii aad la yeelatay Camir Muusa ma waxaad kaga dalbatay kaalmo dhaqaale?” ayuu kaga jawaabay Madaxweyne C/llaahi Yuusuf “Maya ma weydiisan… Camir Muusa keligiina uma babac dhigi karo waxna kama qaban karo gargaarka ay Soomaaliya u baahan tahay, balse waxaan sawir guud ka siiyay xaaladda Soomaaliya iyo waxa aan qorsheysannay inaan qabanno, waxaan u sheegay markii aan dhameyno daraasadda aan ku hayno baahida Soomaaliya inaan markaas u soo bandhigi doonno Jaamacadda Carabta kaddibna aan ka codsanno inay gacan ka geystaan… ma doonayno oo keliya taageero dhanka siyaasadda iyo maaliyadda ah, balse waxaan kaloo doonaynaa in dhinaca farsamada iyo dhismaha ciidanka gacan nalaga siiyo si aan gacanta ugu dhigno nabadgalyada gudaha iyo dibaddaba”.
“Ka warran xiriirka aad la leedahay Dowladaha Carbeed?” “Wax mashaakil ah oo noo dhexeeya ma jiraan… annaga adduunka oo dhan ayaan u furannahay, dhawaan waxaan la kulmay amiirka leh dhaxalka Boqortooyada Sucuudiga Amiir C/lla oo aan warbixin ka siiyay xaaladda Soomaaliya ugana mahadceliyay gacanta ay mar walba la garab taagnaayeen shacabka Soomaaliyeed, sidoo kale waxaan la kulmay Madaxweynaha Dalka Yemen iyo Madaxweynaha Masar, oo dhammaantood aan u fasiray baahida dalka Soomaaliya”.
“Bal ka warran loolanka Itoobiya iyo Carabta ee arrimaha Soomaaliya?” “Loolankaasi waa hore ayuu dhammaaday mana aha mid hadda laga cabsi qabo, waayo annagu hadda waxaan ku jirnaa xilli dadkoo dhan ay nabadi nalaga dhexeyso mana doonayno inaan cid la abuurno cadaawad, mana ogolaanayno in dagaal dambe gudaha Soomaaliya ka dhaco sida aynaan u doonayn inaan dagaal la galno dowlad dibadda ah, dhammaantood gacmaha ayaan u taagaynaa si ay uga qaybqaataan dib u dhiska Soomaaliya”.
“Sax miyaa in madaxda Carbeed qaarkood ay ka shaqeynayaan hagaajinta xiriir wanaagsan oo idin dhex mara maamulka Mareykanka?” “Xageed ka keentay macluumaadka?... annagu waan soo dhaweynaynaa dadaal kasta oo Carbeed oo la xiriira taageeridda Soomaaliya, cid aan xasaasiyad ka qabnana ma jirto, waan ku dadaalaynaa sidaan u hagaajin lahayn xiriirka dalka Mareykanka, gaar ahaan waxa ku aaddan maslaxadda Shacabka Soomaaliyeed”.
SHILALKA BAABUURTA MAREYKANKA XILLIGA CIIDAHA
Maraykanka "hal qof ayaa ku dhinta shil baabuur 30-kii daqiiqaba"
“Ma jeceshahay inaan booqasho ku tagtid Mareykanka is aad ula kulantid George Bush iyo maamulkiisa?” “Weliba waxaan jeclaan lahaa inay waqti dhow noqoto”.
“Adigoo ah Madaxweyne dowlad Carbeed sow ma habboona inaad luuqaddaada Carabiga ah aad hagaajisatid?” Wuu qoslay…. Wuxuuna yiri: “Sida kuu muuqata waxaan ku hadlaa luuqadda Ingiriiska, Talyaaniga, Ruushka, luuqadda afka carabigana si wanaagsan ayaan u fahmayaa, waqti kaddib in ay isbadasho ayaa rajeynayaa’ macallin ayaan qabsan doonaa luuqaddayda Carabiga hagaajiya, kulankeenna dambena waxaad arki doontaa horumarka aan ka sameeyo Luuqaddaas”.
Madaxwaynaha Soomaaliya oo Si Sareeysa Loogu soo dhaweeyay Jabuuti
Waftiga oo ka soo duulay Sanca, ka horna Qaahira kaga soo qayb galay aaskii Arafat ayaa kasoo degay caasimada dalka Jabuuti, waxaana halkaas... Guji..